က်န္းမာေရး Archives - 7DAY THADIN
တန္ဖိုး (အရမ္းေကာင္းလို႔ အခ်ိန္ ၃ မိနစ္ေလာက္ေပးၿပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ )
တန်ဖိုး …! (အရမ်းကောင်းလို့ အချိန် ၃ မိနစ်လောက်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ ) တစ်ခါတုံးက ရွာတစ်ရွာ မှာ ရေထမ်း တဲ့လူ တစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူဟာ ကြီးမားတဲ့ ရေအိုး နှစ်လုံး ကို ပခုံး တစ်ဘက် တစ်ချက်မှာ ထမ်းပြီး ရေသယ်လေ့ ရှိတယ်တဲ့။ အိုးတစ်လုံးက နဲနဲ အက်နေတယ်။ အိုးက …
တန္ဖိုး (အရမ္းေကာင္းလို႔ အခ်ိန္ ၃ မိနစ္ေလာက္ေပးၿပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ ) Read More
April 5, 2022 April 6, 2022 - by admin
သင်ကင်ဆာကြောင့်မသေနိုင်တော့ပါ ကင်ဆာကြောင့်မသေနိုင်ကြတော့ပါဘူး ဒေါက်တာ Gupta က ပြောတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ သေချာဂရုစိုက်ပေးနိုင်ရင် ဘယ်သူမှ ကင်ဆာကြောင့် သေစရာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့ ပထမအဆင့်က သကြားလုံးဝ မစားပါနဲ့ ရှောင်ပါ အဲဒါကင်ဆာဆဲလ်က အလိုလိုသေသွားပါလိမ့်မယ် ဒုတိယအဆင့်က အစာမစားခင်မှာ သံပုရာတစ်လုံးကို ရေနွေးနဲ့ Blend လုပ်ပြီးသောက်ပါ ၁လ ကနေ သုံးလခန့် သော်ပေးပါ Maryland College of …
သင္ကင္ဆာေၾကာင့္မေသႏိုင္ေတာ့ပါ Read More
ညဖက္ေရာက္ရင္ အသက္ဝင္ၿပီး လိုက္ခိုးတဲ့ သူခိုးနကၡတ္နဲ႔ အ႐ုပ္
လှဆောင် တစ်ယောက် ပြုံးရွှင်သောမျက်နှာဖြင့် ကွမ်းလေးဝါးရင်း ရွာသို့ပြန်လာခဲ့သည်။ လက်ထဲတွင် နိုင်ပွဲဆာလောင်စိတ်ပြင်းပြသော ကြက်နီဖကြီးကိုပိုက်ရင်း “မိုက်ချက်ကတော့ ကမ်းကုန်ပဲကွာ အနှောင့်ကလည်းကျ (အတက်ဆူး) တွဲမိလို့ကတော့ မျက်လုံးအပါပဲ ကြမ်းလိုက်တဲ့ ဖေ့သားကြီး ပိုက်ဆံရှာတော်ပါ့” တစ်ယောက်တည်း ဝမ်းသာအားရ စကားများပြောနေသည်။ လှဆောင် သည် ခေသူမဟုတ်။ တစ်ဗွေတည်း ရွာစဉ်လှည့် ကာကြက်တိုက်နေသော ကြေးစား ကြက်သမားကြီးဖြစ်သည်။ သဘောကောင်းသည် သို့သော် …
ညဖက္ေရာက္ရင္ အသက္ဝင္ၿပီး လိုက္ခိုးတဲ့ သူခိုးနကၡတ္နဲ႔ အ႐ုပ္ Read More
ေငြအကုန္က်သက္သာၿပီး လၽွပ္စစ္မီး မလိုဘဲ အလင္းေရာင္ရေစတဲ့ မီးသီး
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လက်ရှိအချိန်ထိ နေရာတချို့တွေမှာ လျှပ်စစ်မီးကို လုံလောက်စွာ မရရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် လျှပ်စစ်မလိုဘဲ အခကြေးငွေသက်သာပြီး လူတိုင်းအလွယ်တကူလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ မိုဆာ (Moser) လို့ခေါ်တဲ့ သဘာဝ မီးသီးလေးအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ မိုဆာ မီးသီးကိုတော့ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ က စက်ပြင်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဲလ်ဖရက်ဒို မိုဆာ (Alfredo Moser) ဟာ လျှပ်စစ်မလိုတဲ့ မီးသီးလုပ်နည်းကို စမ်းသပ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမီးသီးလေးကိုတော့ သူ့ရဲ့ …
ေငြအကုန္က်သက္သာၿပီး လၽွပ္စစ္မီး မလိုဘဲ အလင္းေရာင္ရေစတဲ့ မီးသီး Read More
တိရစာၦန္႐ုံကိုလာတဲ့ ဧည့္သည္ေတြကို ဆဲ ဆို ေနလို႔ ေနရာခြဲထားရတဲ့ ၾကက္တူေ႐ြးအုပ္စု
Unicode ကြက်တူရွေးဆိုတဲ့ငှက်လေးတွေဟာ လူတွေရဲ့ စကားအတိုင်း လိုက်လံတုပပြီး ပြောနိုင်တဲ့ ငှက်ကလေးတွေပါ။ များသောအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ မပီကလာ ပီကလာစကားလေးတွေဟာလူတွေရဲ့နားထဲမှာအရမ်းကို ချစ်ဖိုပကောင်းနေပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့စေပါတယ်။ အခုပြောပြချင်တဲ့ ကြက်တူရွေးလေး၅ ကောင်ဆိုလည်းအရမ်းစကားတတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဒီကြက်တူရွေး၅ ကောင်ကတော့ အရမ်းကိုစကားအတက်လွန်ပြီးတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ဆီလာလည်တဲ့ဧည့်သည်မှန်သမျှကို၅ ကောင်ပေါင်းပြီးထိုင်ဆဲနေလို့အခုဆိုရင်အဆိုပါကြက်တူရွေး ၅ ကောင်စလုံးကိုတိရစ္ဆာန်ရုံဝန်ထမ်း တွေကအတူတူမထားရဲပဲခွဲထားရကြောင်းPeopleသတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါ ကြက်တူရွေး၅ ကောင်ကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ Lincolnshire မြို့မှာရှိတဲ့ Lincolnshire Wildlife …
တိရစာၦန္႐ုံကိုလာတဲ့ ဧည့္သည္ေတြကို ဆဲ ဆို ေနလို႔ ေနရာခြဲထားရတဲ့ ၾကက္တူေ႐ြးအုပ္စု Read More
Unicode နှစ်တွေဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း လက်ရာကောင်းနေဆဲညဈေးထဲက မုန့်ဆိုင်(၄)ဆိုင် ကြည့်မြင့်တိုင် ညဈေးဆိုတာ ဟင်းချက်စရာ သားငါးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ပေါပေါများများ ဝယ်လို့ ရနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်သလို လက်ရာကောင်းပြီးဈေးတန်တဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ အဝတ်အထည်မျိုးစုံ၊ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုံစုံလင်လင် ရနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်မြင့်တိုင်ညဈေးထဲမှာ စားသောက်ဆိုင်လေးတွေ မျိုးစုံတွေ့ရနိုင်ပြီး စားသမျှဆိုင်တိုင်းကလည်း လက် ရာတွေ ကောင်းမွန်သလို …
ႏွစ္ေတြဘယ္ေလာက္ေျပာင္းေျပာင္းလက္ရာေကာင္းေနဆဲညေစ်းထဲကမုန႔္ဆိုင္(၄)ဆိုင္ Read More
Unicode ထန်းရည်အရမ်းကြိုက်တဲ့ လူတွေအတွက်ကတော့ ရွှေဘဲဗျို့။ကင်ဆာရောဂါ၊ မျက်လုံးအမြင်အာရုံ နဲ့ နှလုံးရောဂါ စတာတွေအတွက် တကယ်ကိုအကျိုးပြုစေတဲ့ အစွမ်းတွေရှိပါတယ်နော်။ထန်းရည်အချိုကချိုပြီးအရသာလည်းရှိတဲ့သဘာဝထန်းပင်ကနေရတဲ့ဝိုင်တစ်မျိုးပေါ့နော်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းနာမည်ကြီးတဲ့ သောက်စရာတစ်မျိုးပါ။အနောက်အာဖရိက၊အာဖရိကအလယ်ပိုင်း၊အာရှ၊ တောင်အမေရိကစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာထန်းရည်အချိုကို သောက်သုံးကြပါတယ်။ ကင်ဆာ ရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ပေးထန်းရည်အချိုမှာ ဗီတာမင် B2 လို့ လူသိများကြတဲ့ Riboflavin ဓာတ်ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီဓာတ်က Antioxidant တစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်Free Radicals တွေကိုတိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။ သာမန်ထန်းရည်အချိုကိုအသင့်အတင့်သောက်သုံးပေးရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင် B2 ဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။အမြင်အားကို …
ထန္းရည္ႀကိဳက္တတ္တဲ့သူေတြအတြက္ထန္းရည္ကရရွိႏိုင္မယ့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား Read More
Unicode အဆုတ် ထဲ ကအဆိပ်အတောက်တွေ ကိုဂျင်း နဲ့ဒီလို ရှင်းလိုက် ပါ အဆုတ်ထဲက ဆိပ်အတောက်တွေကိုဂျင်းနဲ့ဘယ်လိုဖယ်ရှား မလဲ…? လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ အဆုတ်လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်အဆုတ် ကျန်းမာရေးကအရေးကြီးပြီးအဆုတ် ကိုသန့်စင်အောင် ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ် သောက်တတ်သူတွေဆိုရင်အဆုတ်ကိုသတိထားပြီးအဆုတ်ထဲကအဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးသင့်ပါတယ်။ ဂျင်း – ဂျင်းကို အသုံးပြုပြီး …
အဆုတ္ထဲကအဆိပ္အေတာက္ေတြကိုဂ်င္းနဲ႔ဘယ္လိုရွင္းထုတ္ရမလဲ Read More
Unicode ပိုင်ရှင်ကို ဒေါ်လာတစ်သန်းကျော်ဝင်ငွေရှာပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ စံချိန်တင်ကျောက်စိမ်းခီရီကြက် ပျော်ရွှင်မှုအတွက်လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေများစွာထဲမှာတော့ကြက်တိုက်တဲ့လောင်းကစားဟာလည်းထင်ရှားလှပါတယ်။ထိုကြက်တိုက်တဲ့လောင်းကစားဟာအာရှနိုင်ငံအနည်းငယ်အတွင်းမှာတော့နာမည်ကြီးတဲ့လောင်းကစားနည်းတစ်မျိုးလဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလဲကြက်တိုက်တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြုလုပ်တဲ့ပွဲလေးတွေများစွာရှိနေမယ့်ချင်းမိုင်မြို့မှာတနှစ်မှတစ်ခါကျင်းပတဲ့ ကြက်တိုက်ပွဲကတော့အကျော်ကြားဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပွဲကတော့အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာရှိတဲ့ ကြက်တိုက်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမိမိတို့ရဲ့ကြက်တွေရဲ့အရည်အသွေးကိုအပြိုင်အဆိုင် စမ်းသပ်ကြတဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းပြိုင်ပွဲလေးအတွင်းမှာအကျော်ကြားဆုံးကတော့ ကြယ်ငါးပွင့်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တိုက်ကြက်ချန်ပီယံပဲဖြစ်ပါတယ်။ Crd Zawgyi ပိုင္ရွင္ကို ေဒၚလာတစ္သန္းေက်ာ္ဝင္ေငြရွာေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့စံခ်ိန္တင္ေက်ာက္စိမ္းခီရီၾကက္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈအတြက္လူေတြဖန္တီးထားတဲ့ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းေတြမ်ားစြာထဲမွာေတာ့ ၾကက္တိုက္တဲ့ေလာင္းကစားဟာလည္းထင္ရွားလွပါတယ္။ထိုၾကက္တိုက္တဲ့ေလာင္းကစားဟာအာရွႏိုင္ငံအနည္းငယ္အတြင္းမွာေတာ့နာမည္ႀကီးတဲ့ေလာင္းကစားနည္းတစ္မ်ိဳးလဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းမွာလဲၾကက္တိုက္တာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးျပဳလုပ္တဲ့ပြဲေလးေတြမ်ားစြာရွိေနမယ့္ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာတႏွစ္မွတစ္ခါက်င္းပတဲ့ ၾကက္တိုက္ပြဲကေတာ့ အေက်ာ္ၾကားဆုံးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုပြဲကေတာ့ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာရွိတဲ့ ၾကက္တိုက္ဝါသနာပါတဲ့သူေတြကမိမိတို႔ရဲ႕ၾကက္ေတြရဲ႕အရည္အေသြးကိုအၿပိဳင္အဆိုင္ စမ္းသပ္ၾကတဲ့ပြဲေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၎ၿပိဳင္ပြဲေလးအတြင္းမွာ အေက်ာ္ၾကားဆုံးကေတာ့ ၾကယ္ငါးပြင့္ဆိုတဲ့နာမည္နဲ႔တိုက္ …
ပိုင္ရွင္ကို ေဒၚလာတစ္သန္းေက်ာ္ဝင္ေငြရွာေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့စံခ်ိန္တင္ေက်ာက္စိမ္းခီရီၾကက္ Read More
လူနာတင္ကားမွာ Ambulance ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ေျပာင္းျပန္ေရးထားရတဲ့ အၾကာင္းအရင္း
လူတိုင်း မေးဖူး ကြမှာပါ… ဘာလို့ လူနာတင်ကားမှာ Ambulance ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ပြောင်းပြန် ရေးထားလဲ ဆိုတာ… ကျနော် ငယ်ငယ်က သိပ်သိချင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ လူကြီးတွေကို လိုက်မေးရင်း မေးရင်းနဲ့ နောက်တော့ သိသွားတယ်။ လူနာတင်ကားမှာ ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတဲ့ Ambulance ဆိုတဲ့ စာလုံးက သိပ်ကို အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး အရေးပါပါတယ်။ Ambulance …
လူနာတင္ကားမွာ Ambulance ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ေျပာင္းျပန္ေရးထားရတဲ့ အၾကာင္းအရင္း Read More